Sii wadida macOS iyo iOS | Waxaan ka socdaa mac
Haddii ay jirto hal shay oo waligiis Apple cadeyn jirtay, waa in nidaamyadooda shaqo ay farqiga keenaan waana iyaga laftooda sameeya aaladaha kala duwan ee Apple soo bandhigto guusha ay hayaan. Qodobkaan waxaan kuugu sheegeynaa sida iskuxirka cusub ee maamuuska sii socoshada inta udhaxeysa macOS iyo macruufka waana taas hada aad ayey uga fududdahay inaad kahesho sawir ama dukumiinti iskaan ah ipadkaaga iphone ama iphone.
Aynu xaaladdeena isku dhigno oo aan u maleyno inaan sameyneyno dukumiinti aan ku dooneyno inaan ku soo bandhigno sawir cayiman oo ah waxa aan aragno xilligan. Hagaag MacOs Mojave iyo iOS 12 way fududahay hadaan otomaatig ahayn.
Si aad awood ugu yeelatid in sawir lagaa qaado iphone-kaaga ama ipad-kaaga si otomaatig ah, MacOs Mojave kaliya waa inaan midig ku riixnaa desktop-ka una guurnaa xulashada "Ka soo dejinta iPhone" ama "Ka soo dejiso iPad ama iPhone" haddii labada aaladood aad ka heli karto. Markii aan gujino ikhtiyaarkaas, menu ayaa lagu soo bandhigaa kaas wuxuu ina siinayaa ikhtiyaarka aan ku qaadan karno sawir ama jaranjaro dokumenti ah.
Haddii aan gujino sameynta madal, shaashadda iPhone-ka ayaa si otomaatig ah ugu daarta codsiga Kaameradda si ay awood ugu yeelato inay qabato sawirka. Markii aan sawir qaadno oo aan ku aqbalno iPhone-ka, sawirku isla markiiba wuxuu ka muuqanayaa desktop-ka Mac si loo isticmaalo.
Haddii, dhinaca kale, aan ku riixno dukumiinti ku yaal jaranjarada, ikhtiyaarka ikhtiyaariga ah ee 'iPhone scan' ayaa furan, waxaan baari doonnaa bogagga aan u aragno inay ku habboon yihiin, Waan aqbalnay oo dukumiintiga si sixir ah ayuu uga muuqanayaa pdf-ka kombuyuutarka Mac-ga.
Dabcan, taxaddar maxaa yeelay waa inaad ka hooseysaa isla shabakadda WiFi si ay wax waliba u noqdaan kuwo hufan oo dhakhso leh. Hadda waa inaad tijaabisaa iyo haddii aad leedahay MacOs Mojave iyo iOS 12 bilow inaad ka faa'iideysato shaqadan cusub.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » MacOS Mojave » Ku hagaaji wax soo saarkaaga hab maamuuska joogtada ah ee u dhexeeya macOS iyo iOS